Shiinaha culus gaari waajib guga caleentooduna BPW ganaax nidaamka trailer dayactir warshad iyo alaab | Dada
waajib culus guga caleen gaari nidaamka ganaax BPW trailer dayactir
Nooca: Spring Bushing
Iyo meesha Asal ahaan: Shandong, Shiinaha
Supply Kartida: 10000 Set / dajisaa per Month
Port: Qingdao, Shandong, Shiinaha
Est. Time (maalmood)
1. faahfaahin Product:
waajib culus ilo caleen gaari
SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10, SUP11, SUP11A ama sida aad u baahan tahay
Black, Red ama sida aad u baahan tahay
Truck iyo Trailer
2. Paymet iyo Terms:
Alwaax ama Steel by sariirtaada ama sida aad u baahan tahay
Nadiifinta gu'ga caleen
Sababta oo ah meesha, ilo caleen loo bandhigi badan wasakhda iyo haraaga wadada. Ka dib markii sano ee la isticmaalo, qayb ka uus ku xirmi kartaa inta u dhaxaysa caleemo biraha. Oo markuu boodh iyo uskag ku ururto-u dhexeeya ilo ganaax, abuurmeena dhicis ah oo ay xirtaan dhici karaan. Halkan waxa aad sameyn si loo soo saaro wasakh:
Tools loo baahan yahay:
labeen ku salaysan silicone
Tallaabada 1: Buufiyo ilo hore xaddiga saxda ah ee degreaser in laga takhaluso wasakh madax adag.
degreaser Automotive waxaa loogu talagalay in la wasakh adag ka qabtaan, si xereen xaddiga saxda ah waa in ay sameeyaan xaaqidda qashinka burburka wadada fudud.
Tallaabo 2: Wire cadaydo wasakh ka ilo iska, oo diiradda saaraya darafyadiisa furan ilihii '.
The daraf oo u furan yihiin more bandhigi burburka wadada, iyaga oo dheeraad ah u nugul dhicin wasakh. Tani waa sababta tallaabo this ka heli kartaa oo aad u kharriban. Si looga hortago ku qariyaan dabaqa aad garaashka ee, hubi in ay ku riday wargeysyada ama bacaha hoos gaariga. Just hayn on cadayashada ilaa raad kasta oo wasakh waa lagaa saarayaa.
Tallaabada 3: Ha ogolaan in kasta guga caleen leh calal nadiif ah ka dib markii iska cadayashada Qurub adag-to-qaad.
Tani waxay hubisaa in ka dhigaysa, in aan wasakh ama hadhay degreaser hadhaagii dushiisa of ilo. Waxaad markaas buufin karaa ilo khafiif ah leh labeen ah silicone ku salaysan si ay uga daxalka ilaaliyo.
Next: gaari Semi guga caleen
ahama Steel Leaf Spring